Seychelles - Fitantanana ny jono | Reef Resilience
Seychelles - Fitantanana ny jono
Fampiasana Telemetry Acoustic Mba Hanatsarana ny Fitantanana ny Fitrandrahana Oniversiten'Antananarivo Ao Seychelles
Nosy Praslin, Seychelles
Ny fahatakarana ny fihetsika asehon'ny karazana fandrahonana dia afaka mampitombo ny fahombiazan'ny ezaka fiarovana ary hampihenana ny vidin'ny fidirana. Ny fampiasana ny faritra voaaro ho an'ny ranomasina (MPA) dia asongadina ho toy ny iray amin'ireo fitaovana ho fiarovana ny karazam-biby an-dranomasina. Na izany aza, ny fahombiazan'ny MPA dia miankina amin'ny fahaizan'izy ireo miaro ireo karazam-borona. Ny karazana tranokala mifototra amin'ny tranokala miaraka amin'ireo faritra kely dia mety hahasoa kokoa noho ireo MPA kely madinika noho ireo karazana finday maro miaraka amin'ireo faritra lehibe. Trondro maro amin'ny vatohara misy faribolana kely no fantatra fa mandroso lavitra, mandritra ny fotoana voafaritra manokana amin'ny taona, ary mamorona angady be dia be izay mety maharitra mandritra ny andro maromaro. Ireo mpifindra monina ireo dia afaka mitondra azy ivelan'ny sisintanin'ny MPA izay tsy misy fiarovana. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia ilaina ny fitantanana ireo karazan-tsakafo ireo amin'ny alalan'ny safidy fitantanana maro izay afaka manome azy ireo fiarovana marobe amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanangonam-bokatra.
Ny trondro goavam-be toy ny tonimaso dia mety tsy ho voaro amin'ny MPA.
Iray amin'ireo trondro bitro, ny hazondamosin'ny Shoemaker (Siganus sutor) dia karazana herbivorosy misy vatohara fantatra amin'ny famolavolana fako lehibe tsy misy fatra. Ny karazam-biby dia endemic amin'ny Oseana Indianina any Andrefana ary misy karazan-tsarimihetsika manan-danja ara-barotra any amin'ny faritra maro, ary matetika dia mahatratra mihoatra ny 40% ny fisamboaran-dranomandry momba ny haran-dranomasina. Any amin'ireo nosin'i Seychelles, ny toeram-pitrandrahana Shoemaker dia manamboatra fitotoana isam-bolana eo amin'ny toerana samihafa manerana ny fotoan'ny volana feno eo anelanelan'ny Septambra sy Jona. Ny toerana sy ny fandaharam-potoana amin'ireny aggregation ireny dia fantatry ny mpanjono eo an-toerana ary ny fisian'ny fisamboarana izay mikendry manokana azy ireo. Mandritra ireo vanim-potoana ireo dia mitombo ny fisondrotan'ny ezaka ezaka ary maro ireo trondro miparitaka no tratra, indraindray na dia talohan'ny nananan'izy ireo fahafahana hiteraka aza. Ity toe-javatra ity dia mampitombo ny ahiahiny mikasika ny fahasalaman'ny tahiry ary manohintohina ny fahombiazan'ny MPAs eo an-toerana amin'ny fiarovana ity karazana ity.
Ho fanatsarana ny safidim-pitantanana mba hiarovana tsara ny fanangonana ny fako simenitra Shoemaker, dia narahan'ny Seychelles Authority Authority (SFA) sy ny Fikambanana Praslin Fishers (PFA) ny fikarohana iraisana. Ny tanjon'ilay fandinihana dia ny fampiasana telemetry amin'ny akustika mba hanangonana fampahalalana mikasika ny fitondran-tena momba ny trondro ahafahana manangona an-tsokosoko izay mety ho ampiasaina amin'ny fitantanana ny ezaka fiarovana ary hampiroboroboana ny fiarahamonina ao an-toerana amin'ny filàna fitrandrahana maharitra ny fitrandrahana. (1) manoritsoritra ny fotoana fialan-tsasatry ny toeram-pitrandrahana Shoemaker amin'ny tranokalan'ny fikambanana malaza, (2) dia manoritsoritra ny lunar sy ny fizaran'andron'ny fahatongavana sy ny fialana any amin'ireo toerana, ary (3) mamaritra ny tsy fahombiazan'ny tranokala manokana. Raha vao vita ny fetran'ny tranonkala fitsangatsanganana toerana manokana, dia nodinihina ny fianarana raha nifototra na nifamahofaho tamina tambajotram-pokonolona nahazendana teo anelanelan'ny toerana roa ny fifangaroan-tsakafo. Ny fanaraha-maso ny famantarana siantifika avy amin'ny trondro marika dia noraisina tao amin'ny toeram-pikarohana roa ary koa tao amin'ny tranokala fitrandrahana telo hafa tao amin'ny faritra izay nampiasa fitaovam-pamakiana akustika. Rehefa nisy mpandika iray tonga tao amin'ny mpandray feo, dia nakatona ho azy ny daty sy ny ora ID. Ny mpikaroka dia afaka nanova ny fihetsika trondro, toy ny fotoana fonenana, ny faharetana, ary ny fotoana hahatongavana sy ny fialana. Ny tanjona faharoa dia ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpiasa ao amin'ny SFA sy ny mpikambana ao amin'ny PFA.
Fametrahana akora mpindrona akora ao amin'ny Shoemaker spinefoot. Sary © Jude Bijoux
Tena nahomby ny fianarana satria afaka nampihena ny fifandonana teo amin'ny mpahay siansa avy amin'ny SFA sy ny mpanjono avy amin'ny nosy Praslin. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpikaroka sy ny mpanjono dia namela ny traikefa azo zaraina, ary nanangana ny camaraderie. Ny fandalinana ny telemetry acoustic dia afaka mamaritra mazava tsara ny fotoam-pisakafoanana sy ny tapakila momba ny fahatongavana sy ny fialan'ny trondro mifangaro amin'ny tranokala, ary koa ny tranokalam-pandaminana sy ny faharetan'ny tranokala. Tsy nampoizina fa ny fanadihadiana dia nampiseho fa nisy fifandimbiasana trondro tsy tapaka nandray anjara tamin'ny fanangonam-bokatra ary ny habetsahan'ny trondro nandray anjara dia ambony lavitra noho ny nino taloha. Ny fandalinana ny fandikan-teny dia nahitana fa ny trondro nasehony dia mampiseho fihetsiketsehana isan-karazany, izay ahitana: 1) naverina tany amin'ny tranonkalany tsy fantatra, 2) nanaovana ny tranonkala misy azy, sy 3) fifanjevoana, izay nahatonga azy ireo nirenireny teo an-toerana. Avy amin'ny fomba fijery, ny fianarana dia nifantoka ny fifantohan'ny besinimaro, indrindra ireo mpanjono ao Praslin, mikasika ny lozam-pifanakalozan-java-manan'aina trondro ary ny fandrahonana mety hitranga. Vokatr'izany, nisy ny fanohanana matanjaka avy amin'ny fiarahamonin'ny mpanjono Praslin nandritra ny famolavolana drafitr'asa momba ny jono fisakanana mba hamerana ny isan'ny trondro trondro nampiasaina nandritra ny vanim-potoanan'ny faktiora.
Ny olana ara-tsosialy sy ara-governemanta:
Zava-dehibe ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra fisorohana sy ny fikarakarana ny jono fisaka. Ireo hetsika ireo dia mamorona ny toerana ho an'ireo olona avy amin'ny andaniny roa hivory, hifanakalozan-kevitra ary hizara traikefa.
Raha vao vita ny fifandraisana eo amin'ny mpanararaotra sy ny mpiasa ao amin'ny fikambanana mpitantana fisarihana, dia zava-dehibe ny mitazona azy ireo amin'ny fandraisana anjara tsy tapaka amin'ny tetikasa sy ny tetikasa vaovao.
Ny tetikasa dia nampiharin'ny SFA sy PFA, ary samy nandray anjara mavitrika tamin'ny tetikasa ny roa tonta tamin'ny fametrahana fanontaniana momba ny fikarohana, loharanom-bola sy fampiharana. Ny fandraisan'anjaran'ny roa tonta dia nahatonga ny tetikasa hahomby.
Ny fandraisan'anjaran'ireo mpanjono amin'ny tetik'asa fikarohana dia fitaovana tsara kokoa hampitomboana ny fahatsiarovan-tena raha oharina amin'ny fampisehoana azy ireo amin'ny vokatra amin'ny fiafaran'ny tetikasa.
Fantatry ny mpanarato be dia be momba ny fitondran'ny karazan-trondro fa misy hevi-diso ihany koa. Ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mpanjono sy mpahay siansa dia ampirisihina mba hahafahan'ireo mpahay siansa mifampizara fahalalana momba ny mpanjono, ary afaka manazava ny toro lalana momba ny siansa koa ny mpahay siansa ary manamafy ny hevi-diso.
Noho ny vidim-pahaizana mahery vaika (US $ 350) sy ireo mpanome fitaovana (US $ 1,300) dia tsy voatery ampiasaina daholo ny toerana fanangonam-bozaka rehetra any amin'ny faritra fianarana ary ny isan'ny trondro azo notarafana (39 ao amin'ny fianarana No. 1 sy 56 amin'ny fianarana No. 2) dia voafetra. Amin'ny toe-javatra toy izany dia mametra ny sandan'ny halehibe dia tsara ny mampifangaro ny fametahana akodika amin'ny fampifangaroana mahazatra izay mora kokoa ary manana fahafahana manome angona fanampiny ilaina.
Ny laha-tahiry ahafahan'ny mpizara mirakitra ireo akondro dia misy fiantraikany amin'ny tabataba ary afaka manova ny vokatra. Ny baikon'ny Sentinel napetraka ao amin'ny tsipika rano amin'ny toerana voafaritra dia tokony ampiasaina mba hamela ireo fakan-tsarimihetsika ho mora lazaina miaraka amin'ny fanovana ny fahombiazan'ny fahitana.
Ireo masoivoho fanangonana an-tsokosoko ihany no nanara-maso ny fampiasana ako manaitaitra ary vokatr'izany dia tsy nisy angon-drakitra nangonina rehefa trondro ny orinasa ivelany.
Ny fitrandrahana arakaraky ny hoditr'akona dia mety haharitra hatramin'ny fito andro miaraka amin'ny trondro tonga ao amin'ilay tranokala alohan'ny hateloana mialoha ny volom-borona ary miala alohan'ny telo andro aorian'ny volana feno. Ny fepetra fiarovana ara-potoana any amin'ny toerana tsy tokony hatahorana dia tokony hifanaraka amin'ireo andro fito ireo.
Ny ankamaroan'ny trondro dia tonga any amin'ny tranokala fandroahana eny an-tsaha rehefa miposaka ary miala amin'ny hariva. Eo no nino fa ireo trondro ireo dia nampiasa ny fiakarana sy ny fipetrahan'ny masoandro ho toy ny fitaovam-pitaterana.
Ny trondro tsy manjary dia maneho ny tsy fahatokisana amin'ireo vondron'olona akaiky mifandraika amin'izany, mampiseho fa ny tsy fivadihana dia any amin'ny faritra iray manokana ary tsy voatery ho toerana manokana. Amin'izay dia omena ireo tranonkala fitsangatsanganana an-tsarimihetsika ireo fa tarihin'ny faritra fa tsy amin'ny toerana mahaleo tena.
Ity asa ity dia nahazo fanohanana avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Marine sy Coastal for Management (MASMA) Fandaharan'asan'ny Siansa Marine Siansa (WIOMSA) sy ny Global Environmental Environment (GEF) Small Grant Program (SGP) ho an'ny Praslin Fishers Association (PFA) (Grant No. SEY / SGP / OP2008 / Y06 / RAF / 4 / 3). Ny fanohanana ara-bola sy ara-logistika dia nomen'ny Seychelles Authority (SFA) avy amin'ny Firaisam-be Eoropeana (EU) avy amin'ny volavolam-pandrindrana ara-politikan'ny sehatr'ireo Fifanarahana momba ny fandrosoana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena / Seychelles.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSeychelles Authority (SFA)
Fikambanana Praslin Fishers (PFA)
GoS-UNDP-GEF tetikasan'ny tontolon'ny biolojika
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikambanana misahana ny Marine Siansa Oseana Indiana (WIOMSA)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamenonam-bazaha fitambaran-jorondrona ny grouper miloko mavo sy voloukôkôkôkôkôlà mamakivaky any amin'ny atoron'ny Ranomasimbe Indianina.manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFahasalamana ara-batana, toerana sy tranokala tsy firaharahiana fanangonam-bozaka trondro haran-dranomasina Siganus sutor